ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ရှေ့နေဟောင်း မိုက်ကယ်ကိုဟင်က အမေရိကန်သမ္မတသည် ''လူလိမ်'' ''လူမျိုးရေးခွဲခြားသူ'' ဟ? - Yangon Media Group
ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ရှေ့နေဟောင်း မိုက်ကယ်ကိုဟင်က အမေရိကန်သမ္မတသည် ”လူလိမ်” ”လူမျိုးရေးခွဲခြားသူ” ဟ?
ဝါရှင်တန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈
ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ပုဂ္ဂလိက ရှေ့နေဟောင်းမိုက်ကယ်ကိုဟင် က အမေရိကန်သမ္မတသည် လူလိမ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လှည့်စားတတ်သူနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားသူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်၌ စစ် ဆေးခံရာတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။ ၎င်းက မိမိအနေဖြင့် အိမ်ခြံမြေ သူဌေးထံ၌ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အပေါ်တွင် ရှက်မိကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
ထရန့်၏ ဂုဏ်သရေကိုပျက် စေသူ ယခင်က ထရန့်၏ဥပဒေ ပြင်ပမှ ပွဲစားလုပ်သူက ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်၏နောက်ဆုံးပြင်ဆင်မှုကြားနာခြင်းတွင် သက်သေ ထွက်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ ထရန့်၏ သမ္မတရွေးပွဲမဲဆွယ်မှုနှင့် ရုရှားတို့အကြား လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုများရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သမ္မတမှာ မြောက် ကိုရီးယားနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ဒုတိယအကြိမ်ထိပ် သီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေချိန် ဖြစ်သည်။
ကိုဟင်မှာ ယခုဘဏ္ဍာရေး ရာဇဝတ်မှုကို ဝန်ခံပြီး ကွန်ဂရက်ကို လိမ်လည်မှုဖြင့် ထောင်သုံး နှစ်ကျခံရဖွယ်ရှိနေသည်။ ထရန့်က ၎င်းအားအပြာမယ်တစ်ဦးကို တရားမဝင်နှုတ်ပိတ်ခငွေပေးရန် တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း၊ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က ဝီကီလိခ်က ဟီလာရီ ကလင်တန်၏ သတင်းများကို ကြို တင်ထုတ်ပေးနေသည်ကို သိရှိနေ ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စနှစ်ရပ်စ လုံးကို ထရန့်က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၆ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်နေစဉ်တစ်လျှောက်လုံး ထရန့်က မော်စကိုရှိ ထရန့်တာ ဝါတစ်ခုတွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ထရန့်က ရုရှားနှင့်မည်သည့်စီးပွား ရေးမှ လုပ်ဆောင်မှုမရှိဟု ငြင်းဆို ခဲ့သည်။
ကိုဟင်က ဆက်လက်ပြော ကြားရာတွင် ထရန့်ကသူ့အား စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်ထွက်ဆိုရန် တိုက်ရိုက်ညွှန် ကြားခဲ့ကြောင်း၊ ဤကိစ္စအား အိမ်ဖြူတော်ရှေ့နေများက ပြန်လည်စိစစ်တည်းဖြတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဤကိစ္စမှာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်က ၎င်းအားကွန်ဂရက်က စစ်ဆေးရာတွင် ထရန့်တာဝါ၌ ညှိနှိုင်းအစည်းအ ဝေးကို လိမ်၍ထွက်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ကိုဟင်ကပြောခဲ့သည်။ ကိုဟင်က ကွန်ဂရက်အမတ်များကို ၎င်းအနေဖြင့် ရှက်မိ ကြောင်း၊ သမ္မတ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှေ့ နေအဖြစ် ၁ဝ နှစ်ခန့်လုပ်လာသည်ကို ရှက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အရေး ကြီးသောအမှုများကို ဥပဒေပြင်ပမှ ပွဲစားလုပ်ပေးခဲ့သည်ကို ရှက်မိ ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
”ကျွန်တော်ရှက်တာက မစ္စ တာထရန့်ဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်။ လူလိမ်ဖြစ်တယ်။ လိမ်ညာလှည့်ဖြားမှုတွေလုပ်တယ်”ဟုကိုဟင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ”ယနေ့ကျွန်တော် ထရန့်အကြောင်း အမှန်အတိုင်းပြောကြားသွားပါ့မယ်”ဟု ကိုဟင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒီမိုကရက် အမတ်အဲလီဂျာဘန်းနင်းက”ကို ဟင်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ဟာ စိုးရိမ်စ ရာဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်အားလုံး ကို ဒုက္ခရောက်စေလိမ့်မယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။ ” ဒါဟာဖောက်ခွဲလိုက်တာပဲ။ ဒီကိစ္စဟာ ကျော်မကောင်းကြား မကောင်းမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အစပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ကို ကိုယ်ကျင့်တရားကြောင့် ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ပေးရန် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ေ?
စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း ဓာတ်အားခ ပေးသွင်းခြင်း မရှိသော ကုမ္ပဏီများကို အရေးယူမည်
စမ်းချောင်းမြို့နယ်က ငွေလဲကောင်တာကို ဓားပြတိုက်မှု ကျူးလွန်သူနှစ်ဦး၏ သဲလွန်စကို ယခုအချိ??
”အကြောက်တရားနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်မေ့ပြီး ကာရိုက်တာအရ သတ္တိတွေ ရှိလိုက်
မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ် မြို့နယ်တွင် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့် ဆားကြမ်း ပိဿာချိန် သိန်း ၁ဝဝ ခန
ပရီးမီးယားလိဂ် ဂိုး ၁ဝဝ ပြည့်ရန် ဒရော့ဘာထံမှ နေ့စဉ်နီးပါး အကြံဥာဏ် ရယူခဲ့ရကြောင်း လူကာကူေ??
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ လူငယ်များ စုစည်း၍ လူငယ်ရေးရာ မူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် မ